Company - SAER ELETTROPOMPE: Water Electric Pumps and Motors
Submersible pumps (from 4″ to 14″) and motors (from 4″ to 12″) up to 300 kWs of power and in different metallurgies (carbon steel, cast iron, bronze, stainless steel, DUPLEX ).
All the products are entirely realized in SAER’s four Companies, established in the north of Italy. SAER Elettropompe Company is certified ISO 9001:2008.
Arrow Trade International Limited ၏နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း
ဤကုမ္ပဏီအား ၁၉၉၀-၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြား Export/Import လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်အနေအထားအရ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဥရောပနိုင်ငံမှနည်းပညာနှင့် အဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမှာယူပြီး မိမိနိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်မှုများတွင် အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအဆင့်အနေဖြင့်ရေအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သော မြေအောက်ရေသန့်တူးဖော်ထုတ်ယူရေး Submersible Pump 4”ɸ To 12”ɸ (0 (0.5HP to 400HP) နှင့်စက်ရုံသုံး ၊ မြစ်ရေစုပ်၊အိမ်သုံးစက်ပစ္စည်းများ (0.5HP to 125HP) ကို အီတလီနိုင်ငံရှိGuastalla မြို့၌ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ပြီး စတုရန်းမီတာ (၁၈၀၀၀၀)ကျယ်ဝန်းသော နေရာရှိစက်ရုံ (၅) ရုံမှထုတ်လုပ်လျှက်ရှိသော (SAER ELETTROPOMPE)SAER ELECTRIC WATER PUMPS လျှပ်စီးရေစုပ်ပန့်နှင့်မော်တာများ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင် (Regd.;) တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ SAER ELECTRIC WATER PUMPS ကို အီတလီနိုင်ငံမှ နိုင်ငံပေါင်း (၁၄၀)သို့တင်ပို့ရောင်းချလျှက် နှစ်စဉ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှ ုတန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း(၅၀၀)ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ သုတေသနပြုရေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများဖြင့်အစဉ်ကြီးကြပ်ရင်း ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင်လည်း လိုအပ်သည်များကို ပြုပြင်ပံ့ပိုးနိုင်ရန် ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီး(၅)တိုက်တွင်ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း(၁၂၀)ကျော်ထားရှိသော နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Arrow Trade International Limited မှအထက်ပါ (SAER ELETTROPOMPE)များကို တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ရယူ၍ တိုက်ရိုက်မှာယူတင်သွင်းဖြန့်ချီပေးလျှက်ရှိရာ၌ (SAER ELETTROPOMPE)မှ ထုတ်လုပ်သောကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကို 150;DIN နှင့်0ISO; C.E စံချိန်စံနှုန်းများမီအောင်ထုတ်လုပ်ပြီး (၁)နှစ်အာမခံပေးပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားမှုအပါအဝင် အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းတွင်လွယ်ကူအဆင်ပြေချောမွေ့စေခြင်း၊ ဖောက်သည်တစ်ဦးချင်း၏ အထူးလိုအပ်ချက်ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဤကုမ္ပဏီ(Arrow Trade International Limited)သည် မှန်ကန်သောအရည်အသွေး၊ တိကျသောပန့်ရွေးချယ်မှု၊ စနစ်ကျသောတပ်ဆင်မှု ၊ သာလွန်သောဝန်ဆောင်မှု ၊ခိုင်မာသောနည်းပညာ ၊ သင့်လျှော်သောဈေးနှုန်းတို့ဖြင့် SAER ၏ဂုဏ်သိက္ခာကို မြန်မာပြည်မှာတည်ဆောက်ခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်ခွဲကျော်ခဲ့ပါပြီ ၊ အီတလီနိုင်ငံမှတပါး မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မှထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း လုံးဝမရှိပါ။သို့အတွက်ကြောင့် ဈေးကွက်တွင်ထိပ်တန်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(၁) SAER/Italy အိမ်သုံးစက်(Domestic Use Pumps)များသည်လျှပ်စစ်ပါဝါအနည်းငယ်သုံးခြင်းအားဖြင့်မြင့်မားသော (High Head)များအထိ စက်စွမ်းရည်နှင့်လိုက်ဖက်သောရေဂါလံများကို အလွယ်တကူစုပ်ယူတင်ပေးနိုင်ပါသည်။
(၂) SAER ရေစုပ်စက်များတွင်ရေချူရန်မလိုအပ်သော Self-Primming Jet Pump အမျိုးအစားများကို (၁၀)မီတာအနက်မှ စုပ်တင်ပေးနိုင်သည့်အပြင် ရေတွင်လေ၊ဓာတ်ငွေ့ရောနှောပါရှိစေကာမူ ရေထွက်အားကိုမထိခိုက်စေပါ ။ဤရေစုပ်စက်များကိုဂျိုးဖြူပိုက်လိုင်းသုံး၊အိမ်သုံး ၊ စက်ရုံသုံး လုပ်ငန်းများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အပူချိန် 50C ထက်မပိုသော ဓာတုဗေဒအရည်ပြင်းထန်မှု မရှိသောအရည်များကိုလည်းစုပ်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
(၃) SAER ရေစုပ်စက်များတွင် Varnish/ Thick Oil / Viscous Liquide/ Glue /Molasses / Soaps /Grease စသည့်ဓာတုဗေဒအဆီများစုပ်တင်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သောGear Pump (ဂျီယာပန့်)အမျိုးမျိုးကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
(၄) အဝီစိတွင်းသုံးရေမြှပ်ပန့်များ အဝီစိတွင်းမှရေကိုစုပ်တင်ပေးနိုင်သော P4”,6″,8″,10″,14″အလုံးပတ်အရွယ်အစားရှိ ရေပန့်များကိုလည်းမြင်းကောင်ရေ 0.5HP မှ 400HP အထိအမျိုးမျိုးရှိရာ အမြင့်တင်အားကို၁၉၅၁ပေအထိလည်းကောင်းရေဂါလံအများဆုံး ၃၂၀၀ ဂါလံအထိလည်းကောင်း ထုတ်ပေးနိုင်သောအမျိုးအစားကောင်း အဝီစိတွင်းသုံးပန့်များဖြစ်ပါသည်။
(၅) Itap ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ (Itap Pipe Fitting Italy) အီတလီရေစုပ်စက်များနည်းတူ အီတလီနိုင်ငံလုပ် အဆင့်မြင့် Itap ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုလဲ ကျွန်တော်များကုမ္ပဏီမှပင်
တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ရယူ၍ တင်သွင်းရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ အပူချိန် 220C အထိခံနိုင်ပြီး 25Bar (360psi) အထိဖိသိပ်အားခံနိုင်သော ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။စက်ရုံအလုပ်ရုံနှင့်လေဖိအားသုံးနေရာများ၊ ရေပူရေအေးသုံးပိုက်လိုင်းများ၊ ဆီအမျိုးမျိုးသုံးပိုက်လိုင်းများနှင့် ဖိသိပ်လေနှင့်ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုသောပိုက်လိုင်းများ၌ အထူးတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခုအခါကျွန်တော်များကုမ္ပဏီမှ Itap ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း (၁၅၀)ကျော်ကိုမှာယူတင်သွင်း၍ လက်လီ၊ လက်ကားအမြောက်အများရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ Arrow Trade International Limitedသည် နည်းပညာကောင်းအဆင့်မြင့်ရေတင်ပန့်များကို အများပြည်သူအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်စေရန်အတွက် ပင်မအရာင်းပြခန်း (Main Showroom)ကို အမှတ်(၁၆၁)မြေညီထပ်၊ဗိုလ်ဆွန်ပတ်လမ်း(အလယ်) ၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှအပ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်အပ်ကုန်ဆိုင်ခွဲပေါင်း (၁၃)ဆိုင်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် အပ်ကုန်ဆိုင်ခွဲပေါင်း (၂၀)ခန့် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ Arrow Trade International Limitedသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကုန်ပို့၊ကုန်သွင်း (Export/ Import) မြန်ဆန်လွယ်ကူစေရန် Sister Company တစ်ခုဖြစ်သော (AUSSIE RAYAN INT’L PTE. LTD.)6Eu Tong Sen Street,#07-09 The Central SOHO-1,Singapore 059817တွင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။SAERရေစုပ်စက်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှ ု၊ဝန်ဆောင်မှုတို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြ၍ဝယ်ယူအားပေးကြသောဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကုမ္ပဏီ၊ စက်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆောက်လုပ်ရေးနှင့် တပ်မတော်ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီရာတပ်များကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့်အများဆုံးဝယ်ယူအားပေးကြသောCustomerများ၏အချို ့သောစာရင်းကိုပူးတွဲတင်ပြအပ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် INDIA နိုင်ငံရှိ(၁၉၃၅)ခုနှစ်မှပင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောLa-Gajjar MACHINERIES PVT.LTDမှISO9001:2000Regd.,Acidwala Estate,Nagarwel Hanuman Road,Amraiwadi,Ahmedabad380026.India CompanyကိုArrow Trade International Limited မှ(၂၀၀၇) ခုနှစ်တွင်ဆက်သွယ်မှုရယူ၍အဆိုပါကုမ္ပဏီမှအင်္ဂလန်နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိသောVARUNA အမှတ်တံဆိပ်Submersible Pump(0.33HP to 225HP)များကိုခိုင်မာသောကတိခံဝန်ချက်နှင့်မြန်မ နိုင်ငံ၏တစ်ဦးတည်းရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါသည်။ Arrow Trade international Limited သည်ရေသန့်ရှားပါးမှုပြဿနာနှင့်ရေအရင်းမြစ်ရှာဖွေရေးတွင်ခေတ်မှီနည်းပညာနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ပူးပေါင်း၍ရေရရှိမှုကိုအကျိုးပြုလျှက်ရှိသောကုမ္ပ ဏီတစ်ခုဖြစ်၍အထက်ဖော်ပြပါရေစုပ်ပန့်မျိုးစုံနှင့်ဥရောပနိုင်ငံစုံမှWater Supply Pumpအစုံကိုမှာယူပြီးဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အီတလီနိုင်ငံလုပ်SAER/ရေစုပ်စက်များ၏ဖွဲ့စည်းမှု SAERရေစုပ်စက်များကိုရေဘူယျအားဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
(၁)ရေစုပ်စက်ကိုယ်ထည်ကို(Cast Iron /Steel /Bronze)ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
(၂)ရေဒလက်(Impeller)ကို(Bronze/Stainless steel/Thermoplastic Resin)ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
(၃)မော်တာဝင်ရိုး(Shaft)ကိုသံမဏိ(Stainless steel AISI-431)ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
(၅)Pump ကိုSAER Induction Motor(Protection:IP55,Insulation.,Class F)ဖြင့်လည်ပတ်စေပြီးTemperature of the pumped liquid from -15C up to +120Cခံနိုင်ပါသည်။
(၇)အချို့အမျိုးအစားများတွင်Pump Bodyကိုသံမဏိ(Stainless steel)သို့မဟုတ်ကြေး(Bronze)ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။မော်တာလောင်ကျွမ်းခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်Single Phase မော်တာများတွင်မြင်းကောင်ရေ(2.2ံHP)အထိကို Thermic Motor- Protectorတပ်ဆင်ထားပါသည်။
အာမခံပေးခြင်း(Warranty) ကျွန်တော်များArrow Trade International Ltd.,မှဝယ်ယူသောSAER/VARUNA လျှပ်စစ်ရေစုပ်စက်များကိုစနစ်တကျအသုံးပြုသော်လည်းရေစုပ်စက်အသုံးပြုသူ၏မှားယွင်းမှုမှအပချွတ်ယွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါကဝယ်ယူသောနေ့မှတစ်နှစ်ကာလအတွင်းအခမဲ့ပြုပြင်ပေးပါသည်။